एन्टी हिरो सर्दा जसितालाई कती घाटा ? « Mazzako Online
एन्टी हिरो सर्दा जसितालाई कती घाटा ?
अभिनेत्री जसिता गुरुङ सिनेमा छायांकनको प्रतिक्षामा छिन् । उनको यो बर्ष कुनै पनि सिनेमा रिलिज नहुने भएका छन् । गतबर्ष सिनेमा लभ स्टेशन असफल भएपछि जसिताका लागि हिट सिनेमा पनि चाहिएको छ । तर, उनले काम गर्ने पक्का गरेर बसेका २ सिनेमाको नै छायांकन सुरु हुन सकेको छैन ।
उनले रेनशा वान्तवा राइको निर्देशनमा तयार हुन लागेको सिनेमा आई एम ट्वान्टी वान पनि साइन गरिन् । तर, यो सिनेमाको छायांकन सुरु हुनै सकेको छैन । उनले सिनेमा एन्टी हिरो पनि साइन गरिन् । अभिनेता अनमोल केसीसँग उनले काम गर्ने भनिएको यो सिनेमाको छायांकन पनि तत्काल सुरु नहुने भएको छ । निर्माता भूवन केसीले अनमोललाई नै हिरो राखेर सिनेमा पारस बनाउने भएपछि एन्टी हिरोको छायांकन पछि धकेलिएको छ ।
यसलेगर्दा, जसिताको पर्खाइको समय लम्बिएको छ । यसो गर्दा उनको पर्दामा आउने ग्याप अझै लम्बिएको छ । यसले उनलाई घाटा लाग्न सक्छ । तर, वैशाखबाट सिनेमा आई एम ट्वान्टी वानको छायांकन सुरु भएमा उनलाई राहत मिल्नेछ ।